TANA-MASOANDRO : “Tsy misy tsy vitan’ny fifampiresahana”, hoy Ranesa Firiana
Fifampiresahana no tsy ampy eo amin’ny mponina sy ny mpanatanteraka ny tetikasa Tana-masoandro, hoy ny Sekretera Jeneralin’ny MPTDN, Ranesa Firiana Rakotonjanahary. 22 octobre 2019
Nambarany fa misy lalàna mametra ny fanalana ny olona amin’ny taniny ary io lalàna io dia milaza mazava fa azon’ny fanjakana atao ny maka ny tanin’olon-tsotra iray hampiasaina amin’ny tombontsoan’ny besinimaro. “Ny ataon’ny fanjakana dia mitady ny fifandaminana sy ny fifampiresahana. Ny tranga misy amin’izao fotoana izao mantsy raha dinihina dia toy ny hoe misy tsy mahazo ny tena tanjon’ny Filoha ka misy mihitsy ireo miteniteny foana sy manohitra bontolo fotsiny izany”, hoy ny nambarany.
Notsiahivin’ity sekretera jeneraly ity fa fandrindrana vaovao hamahana ny olana eto amin’ny tanàn’Antananarivo ny tetikasa Tana-masoandro. Ilain’ny vahoaka izany, hoy izy. Betsaka mantsy ny mitaraina noho ny fahateren’ny tanàna sy ny fitohanana vokatr’izany. Mandany ora roa na telo mihitsy ny olona iray vao tonga amin’izay toerana alehany rehefa voatazon’io fitohanana io. “Diso tanteraka aloha ny filazan’ny sasany hoe nahoana no tsy atao any Tampoketsa ny Tana-masoandro fa any no malalaka. Tsy maintsy atao manakaiky an’Antananarivo ny tetikasa satria izany no hahafahana mamaha haingana ny olana zakain’ny mponina eto isan’andro”, hoy ny fanazavany.
Tsara raha jeren’ny andaniny sy ny ankilany koa, hoy izy, ny mahakasika ny dingana arahina amin’ny fanatontosana ny tetikasa. “Tsy misy tsy vitan’ny fifampiresahana, na ny ady rehetra teto amin’izao tontolo izao aza dia nifarana teo ambony latabatra mandrakariva ka ny irariana dia ny hisian’ny fitoniana hahavitan’ny tetikasa satria efa veliranon’ny Filoham-pirenena ary anisany antony iray nifidianan’ny vahoaka azy ny fanatanterahana ny tetikasa Tanamasoandro”, hoy ny fanazavany. Nambarany koa fa fomban-javatra ihany ny fanoherana tahaka ireny fa rehefa eo izay fifampidinihana izay dia milamina ho azy ny ambiny.
“Rehefa misy mpitondra fanjakana manatanteraka tetikasa goavana dia tsy maintsy misy foana ny mpanohitra, mety ho vondron’antoko izany na antoko politika. Na ahoana anefa na ahoana ny zava-misy, ny zavatra tokony hatao dia ny mametraka ny marimaritra iraisana sy ny ara-dalàna satria izany no ahitana vahaolana sy hahafahana mandroso”, hoy hatrany ity sekretera jeneraly sady mpahay lalàna ity.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68197) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (638) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (344) 21 février 2020 Niatrika famotorana savaranonando omaly maraina NY RADO RAFALIMANANA (227) 19 février 2020 Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny Kianja Barea ny Filoham-pirenena FANATANTERAHANA NY VELIRANO (215) 18 février 2020 Zandary iray nitifitra nahafaty ny Raibeny, nitifi-tena koa izy ka maty AMBALAVAO (195) 18 février 2020